निशासले सार्वजनिक गर्यो पल्सर १५० ट्विन डिस्क (भिडियो) – Saurahaonline.com
चितवन, २७ साउन । पूर्वी चितवनमा बजाजको पल्सर १५० ट्विन डिस्कको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपालमा सर्वाधिक विक्री हुने मोटरसाईकल ब्राण्ड बजाजले चितवनसहित आज देशैभरका आफ्नो आधिकारिक शोरुमबाट पल्सर १५० ट्विन डिस्कको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा रहेको बजाजको आधिकारिक विक्रेता निशास मोर्टस्ले पनि नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको हो ।
एक भव्य समारोहका विच ईलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरिक्षक दयानिधि ज्ञवाली र निशासका प्रबन्ध निर्देशक संजिव थापाले संयुक्त रुपमा नयाँ पल्सर १५० ट्विन डिस्क सार्वजनिक गरेका थिए ।
सो अवसरमा प्रहरी नायब उपरिक्षक ज्ञवालीले सवारी चलाउदाा दुर्घटनाबाट जोगिने गरि चलाउन सबैमा अनुरोध पनि गरे ।
. मोटरसाईकलको स्पोर्ट सेग्मेन्टमा नयाँ आयाम थप्नको लागि पल्सर १५० ट्विन डिस्कको डिजाइन बजारमा ल्याईएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ मोडलले बाईकले ग्राहकलाई नयाँ जोश र नयाँ अनुभूति प्रदान गर्ने र मोटरसाईकल प्रविधि र डिजाईनलाई त्यसरी नै पुनः परिमाणित गर्ने प्रबन्ध निर्देशक थापाको दावी छ ।
पल्सरले २००१ मा पहिले गरेको थियो । पल्सर बाइकका मोडलरु लन्च भए देखिनै आपmनो आधुनिक एवं पृथक डिजाईन र उत्कृष्ट पर फ्रर्मेन्सको लागि चिर परिचित रहेको कम्पनी जनाएको छ ।
कम्पनिको रणनिति बारेमा जानकारी दिदै प्रबन्ध निर्देशक थापाले भने “यसमा रहेको १५० सिसि डि. टि. एस आई इन्जिनले दिने १४ पि. एस पावरले ग्राहकको दैनिक जिवनमा रोमाञ्चक एवं आराम दायी यात्राको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ . यो अतुलिय पावर र माइलेजको उत्कृष्ट सामायोजनले यस सेग्मेन्टको बाईकहरु मध्येमा उत्कृष्ट हो ।
जसलाई आरामदायी सवारीको आनन्द लिन छ उनीहरुको लागि पल्सर १५० ट्विन डिस्क सच्चा सहयात्री हुनेछ ।”
डि टि एस आई इन्जिन ः उत्कृष्ट १४पि एस पावर र उत्कृष्ट माइलेज, डिजिटल मिटर ः आधुनिक एवं आकर्षक, ट्विन डिस्क ः ब्रेकिंग क्षमता, नाइटो«क्स सन्स्पेन्सन ः आरामदायी सवारीको सुनिश्चतता, डि. सी इग्निशन तथा लाइटिङ्ग सिस्टम ः सजिलो स्टार्ट, वाइड ट्युबलेस टायरहरु ः अझ राम्रो रोड ग्रीप र सुरक्षा र बिगडाया मीटर फ्रन्टफोर्क ः स्पोर्टीलुक्स र सस्पेन्सनलाई बलियो मुख्य विशेष रहेको छ ।
तीन रंगमा उपलब्ध यो मोटरसाईकलको मुल्य २ लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । यो आज नै पूर्वी चितवनको खैरहनीको आर्शिवाद अटो मोबाईल्समा समेत यो बाईक सार्वजनिक गरिएको छ । नारायणगढमा रहेको नारायणी मोर्टस्मा यो बाईक सार्वजनिक गरिएको छ ।